Ngaba kuyimfuneko ukuba ne-4G kwi-eReader yakho? | Uncwadi lwangoku
UMonica sanchez | | Ilizwe ledijithali
Ukwenziwa kweDijithali kuya kubonakala ngakumbi. Amaphephandaba angamaphepha anikwe ithuba kumaphephandaba akwi-intanethi. Kwaye kwenzeka okufanayo nakwiincwadi. Incwadi yephepha eqhelekileyo ithathelwe indawo yincwadi ye-elektroniki. Ewe, kwimeko yokugqibela kukho abo bane-4G ebooks ngokuthe ngqo ukuba babe nenkululeko yokufunda nokukhuphela iincwadi naphi na apho bafuna khona. Ngaba i-4G ibaluleke kakhulu kwi-eReader?
Kuya kuxhomekeka kumntu ngamnye, ekubeni kukho izinto ezahlukahlukeneyo njengethuba lexesha eliza kuba ngaphandle ngaphandle kokuba nenethiwekhi ye-Wi-Fi ekufutshane, indawo yokugcina incwadi ye-elektroniki kunye nombutho ngamnye.
Ukuthathela ingqalelo oku, kuvula iimeko ezimbini. Kwelinye icala, ukuba abo babona kude kwaye bakhuphela iincwadi abaza kuzifunda ngexesha abaza kube bengenayo i-intanethi. Kwaye, kwelinye icala, ukuba abo bangazi ukuba bashiye kangakanani ukugqiba incwadi kwaye, ke ngoko, bakhetha unezinga le-intanethi ye-4G nokuba baphi na.
Kuyinyani ukuba ngoku ngenxa yeengxaki zoqhagamshelo lwe-intanethi akuyi kuba njalo, kuba uninzi lwamaziko (amaziko okuthenga, iivenkile zokutyela, iikhefi, iiflethi okanye iihotele apho siza kuhlala khona ...) zihlala zinenethiwekhi yeWiFi. Kusenokuba imeko yokuba akukho WiFi kwiindawo ezikude ngakumbi njengendlu ezintabeni okanye xa uchitha imini elunxwemeni. Kwezi zihlandlo, kuya kufuneka kuvavanywe ukuba ngaba ihlawula ngokwenene na ukususela ngoko i-ebook ye-4G iya kuhlala ibiza kakhulu.
Umahluko wexabiso uya kuxhomekeka kwimodeli ofuna ukuyithenga kodwa, ngokubanzi, ezo ziyi-4G zihlala zibiza phakathi kwe-60 kunye ne-70 ye-euro ngaphezulu.
Umthombo: ulungiswe yi-Roams evela kwidatha ye-Amazon.com
Kukho ezinye iimodeli ezingafumaneki ngokuthe ngqo kwi-4G njengezona nguqulelo zisisiseko, umzekelo, kunye ne-8GB yokugcina. Ukongeza kwinto yokuba ii-ebooks ze-4G azinoqoqosho oluncinci, eminye imiba kufuneka ithathelwe ingqalelo njengale:
Ubomi obufutshane bebhetri yesixhobo xa uqhagamshelwe kwi-4G
Ukukhangela kancinane kuxhomekeke kwi-coverage kwindawo esikuyo
Ubunzima obukhulu ukuba banonxibelelwano lwe-4G
Ukusuka apha, kusele kuphela ukuvavanya ukuba yeyiphi inketho esilungeleyo, kuba i-4G kwi-ebook inokuba luncedo ngamaxesha athile, kodwa inokukhokelela kwezinye iziphazamiso ezivela ngokuchanekileyo kunxibelelwano olukhankanyiweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ilizwe ledijithali » Ngaba kuyimfuneko ukuba ne-4G kwi-eReader yakho?